Isashosholoza iSundowns, ifake uswazi kwiChippa - Impempe
OweNatal Rich Boyz ufuna ukuqhubeka nokuhlohla amagoli kwiPremiership
Isashosholoza iSundowns, ifake uswazi kwiChippa
April 12, 2021 Impempe.com
Ikucacisile iMamelodi Sundowns ukuthi ukwehlulwa emdlalweni wayo odlule kube yiphutha ngesikhathi iziphuzela umsobho kwiChippa United eyishaye ngoswazi oluncane luka 2-1 emdlalweni weDStv Premiership eSisa Dukashe Stadium, eMonti ngoMsombuluko ntambama.
ISundowns bekubonakala ukuthi ifuna ukusheshe isule icashaza elithole ngokushaywa kwayo ngo 2-0 yiCR Belouzdad emdlalweni wayo wokugcina esigabeni samaqoqo kwiCaf Champions League.
Yize lowa mdlalo wangoLwesihlanu ubungasasho lutho kwiSundowns, kodwa umqeqeshi wayo, uRulani Mokwena ukuvumile ukuthi kubakhubile emoyeni ukwehlulelwa ekhaya nokwenza.
Yingakho beye kwiChippa bengasadle zinkobe zamuntu nje, kucaca ukuthi bafuna ukubuyela emgqigqweni wabo kwazise bese bedlale imidlalo engu-29 bengayazi induku kuyo yonke imiqhudelwano kusukela ngesizini edlule.
Kuthe ngomzuzu ka-16, yabekelwa iphenathi ngemuva kokuthi kudlaliswe kabi u-Aubrey Modiba. UThemba Zwane ube eseyithatha, walibeka enethini ibhola ukubeka iSundowns phambili.
Kube khona namanye amathuba ebingakora ngawo iSundowns kodwa kuze kwayiwa ekhefini kusenegoli elilodwa. Kuthe kusaphele imizuzu emithathu kubuyiwe, uZwane ubethi uyaqeda ngeChippa, kodwa ibhola lakhe laceza kancane eceleni.
Kuthe kusukwa lapho, iChilli Boys yadla ngesivinini yaze yayongena ebhokisini leSundowns, ibhola lahlala phambi kuka-Augustine Kwem, waliqabulisa inethi. Bekungumzuzu ka-48 lingena leli goli lokulinganisa.
Kodwa ibuyele kulo iqhinga layo lokuyoquba emuva, izame ukuvimba ukuthi iSundowns ingangeni kodwa leli bekungelona icebo elihle kwazise izama zonke izinhlangothi ize igcine iyitholile imbobo.
Yingakho kuthe ngomzuzu ka-74, uPeter Shalulile wayibhakuzisa inethi ngemuva kokuthi kube nesidididi ebhokisini leChippa izama ukuchitha umnyakazo weSundowns kodwa kwagcina kungalunganga.
ISundonws icishe yalithola elesithathu sekubalwa imizuzu umdlalo uphele, kodwa ibhola likaShalulile lazishayisa epalini selimdidile uCharles Watenga obesezintini kwiChippa.
Previous Previous post: Akananxa kodwa akezuyincenga iSundowns uLaffor
Next Next post: AmaProteas azibuyise zishisa kwiPakistan eWanderers